Fisorohana aretina "Coronavirus" :: Tafakatra fito ambin’ny folo ireo olona arahi-maso eny Anosiala • AoRaha
Fisorohana aretina « Coronavirus » Tafakatra fito ambin’ny folo ireo olona arahi-maso eny Anosiala
Manamafy ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka fa mbola tsy nahitana trangan’aretina “Coronavirus” eto Madagasikara. Mijanona ho ahiahy aloha hatreto ny fisian’io aretina io eto amintsika. Mitombo anefa ireo olona nalefa eny amin’ny hopitaly Anosiala. Fito ambin’ny folo no arahi-maso akaiky amin’ny toe-pahasalamany eny an-toerana, amin’izao fotoana izao. Teratany sinoa ny sivy, raha Malagasy ny valo, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny sampandraharahan’ny tolotra ara-pahasalamana ao amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka.
Misy amin’izy ireo no nahitana soritsoritra aretina toy izay tsikaritra amin’ireo mety ho voan’ny aretina “Coronavirus”. Ny sasany kosa tsy marary fa tsy maintsy nandraisana fepetra fitazomana mandritra ny efatra ambin’ny folo andro, noho izy ireo avy any Shina sy nandalo tany amin’io firenena io.
“Teratany malagasy roa amin’ireo no vao tonga, omaly hariva (Ndrl:afak’omaly). Ny iray no nahitana fambaran’aretina saingy mbola mandeha ny fitiliana rehetra. Mikasika an’ilay zazavavikely sinoa, enina taona, kosa dia efa nivaly ny fitiliana natao azy fa tsy voan’ny “Coronavirus” izy, saingy mbola tazomina mandritra ny efatra ambin’ny folo andro ihany. Tsy marary akory ny sasany fa arahi-maso fotsiny”, hoy hatrany ny mpitsabo iray eny amin’ny hopitaly Anosiala. Nohamafisiny fa mbola tsy ahitana trangana aretina “Coronavirus” eto Madagasikara, hatreto.
Tsy misy fitsaboana manokana ity aretina ity. Mitovy amin’ny fitsaboana rehetra ihany no atao amin’ireo olona nahitana ny soritra aretina, toy ny fanaviana sy ny kohaka. Ireo zazakely sy efa nahazo taona ary ireo manana aretina mitaiza no mora andairan’ny aretina sy mety hamoy ny aina mihitsy satria marefo ny hery fiarovany, araka ny fanazavana. Eny amin’ny hopitaly Anosiala ihany aloha no toerana natokan’ny Fanjakana handraisana an-tanana an’ireo olona ahiahiana ho tratran’ny aretina Coronavirus.
Fantatra fa tafakatra arivo mahery ireo olona namoy ny aina tany Shina ary roa arivo sy efatra alina kosa no mitondra ny tsimok’aretina. An-jatony ao anatin’ny 24 ora ny olona matiny. Firenena telopolo no efa ahitana ny tsimok’aretina, amin’izao fotoana izao, ka efajato ny olona voany.
Famerana ny tsena Nahazo ny anjarany ireo mpivarotra amoron-dalana
Fanatsarana fifamoivoizana :: Hiitatra amin’ny faritra hafa ny fametrahana ny zotra filamatra
Fahasalamana :: An’aliny ireo olona voan’ny tazomoka